Hormone Reproductive, dlala Inaliti, Altrenogest Solution yomlomo - hormone Second
Manual for Inaliti vitamin AD [Inkcazelo] Lo imveliso mthubi ulwelo ezingenambala okanye ukukhanya ecacileyo ezinamafutha. [Umsebenzi kunye Sebenzisa] Le mveliso iqulethe vitamin A kunye D. le vitamin A nga ukusebenza njengoko phambili ukukhula anima
Hormone iziyobisi. Le imveliso kunokusenza intlanzi hypophysis ukumkhulula GTH; ukuphucula follicle fish obhinqileyo cell estrogen leyo eya kunceda ukukhawulezisa follicle ukukhula, ovulation kunye nokuveliswa corpus luteum; ukuvuselela imveliso sperm kunye nokuvuthwa neentlanzi eyindoda. It is a odinagogue intlanzi eliphezulu-efanelekileyo, ukuqinisekisa ukusebenza ngcono ingakumbi weentaba
Sizimisele ukuba eyona nto inkampani ukuba unalo umgangatho intle yentsimi yethu.
Siza kulandela iteknoloji eziphambili ehlabathini kanye Israyeli professional ukudala umgangatho ophezulu wenkonzo ilungileyo, nabo bafumane igama kunye share emarikeni kunye ukuthembeka okulungileyo ingqibelelo kwakunye nomgangatho izinzile.
Ningbo Second hormone Factory yasekwa ngo-1988 Siye babenikelwe kwishishini lokuvelisa izilwanyana kangangeminyaka engama-30, kwaye sidibanisa izinto zokwenza imveliso, uphando kunye nophuhliso, ukwenziwa, iimviwo, intengiso, kwaye inkxaso kubathengi kunye ukuba ishishini ngomlinganiselo omkhulu. inkampani yethu yanikezelwa njenge "Zhejiang kushishino High-zobugcisa" kunye Cixi Top 20 namashishini "...
Uqhagamshelane nathi ukufumana ulwazi oluphangaleleyo okanye wenze amalungiselelo